डी.वी टुहुरो प्रतिष्ठानको प्रथम अधिवेशन
– अमरजित पुनमगर रोल्पा । साहित्यकार डी.वी. टुहुरोका नाममा स्थापित डी.बी. टुहुरो साहित्य प्रतिष्ठान नेपाल, रोल्पाको प्रथम अधिवेशन शुक्रबार लिबाङमा सम्पन्न भएको छ । अधिवेशनले पुनः नारायण जिज्ञासुको अध्यक्षतामा नयाँ…
सीमावारि सीमावारि पुरस्कार साहित्यकार क्षेत्रीलाई
रोल्पा । कवि पुरण क्षेत्रीको ‘देशले हाम्रो उत्साह खोजिरहेछ’ कवितासङ्ग्रहलाई ‘सीमावारि सीमापारि पुरस्कार–२०७१’ प्रदान गरिएको छ । शनिबार रोल्पाको लिबाङमा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि प्रमुख जिल्ला अधिकारी मित्रलाल शर्माले कवि…
‘मृत्युञ्जयी जीवन’ खण्डकाव्यको समीक्षा
रोल्पा, १७ साउन । कवि गंगामुक्ति पुनको खण्डकाव्य ‘मृत्युञ्जय जीवन’को शनिबार लिबाङमा समीक्षा गरिएको छ । राप्ती साहित्य परिषद् जिल्ला शाखा रोल्पाद्वारा आयोजित कृति समीक्षा कार्यक्रमको पाँचौ शृङ्खलामा पुनको खण्डकाव्यमाथि…
गीतकार पद्माका तीन कृति सार्वजनिक
कृतिहरुको आम्दानी गाउँको विकासमा काठमाडौं । आफ्नो सिर्जना–यात्रालाई गाउँको दिगो विकाससँग जोडेकी गीतकार पद्मा लिंखा मगरले एकसाथ तीन वटा कृति बजारमा ल्याएकी छन् । बिन्ध्यवासिनी म्युजिकले शनिबार काठमाडौंमा कार्यक्रमको आयोजना…
‘गुराँस कहिल्यै फुल्ने छैनन्’को समीक्षा
घोराही, २५ असार । ‘गुराँसहरु कहिल्यै फुल्ने छैनन्’ कथा संग्रहको शुक्रबार समीक्षा गरिएको छ । राप्ती साहित्य परिषद् दाङ शाखाको नियमित कार्यक्रम कृतिसमीक्षा अन्तर्गत १ सय ९९ औं श्रृंखलामा कथाकार शालिक क्षेत्रीको…
साहित्यकार पन्तलाई घरमै पुगेर सम्मान
दाङ, १४ असार । राप्ती साहित्य परिषद् दाङ शाखाले अग्रज साहित्यकार एवं समाजसेवी गिरिराज पन्तलाई सम्मान गरेको छ । परिषद्ले स्रष्टा घरभेट एवं सम्मान कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो पटक पन्तको निवास घोराही–२…
हीरकजन्मोत्सवको अवसर सम्मान
दाङ, १५ जेठ । राप्ती क्षेत्रकै अग्रज साहित्यकार गिरिराज शर्मालाई ७५ औं जन्म दिन हिरक जन्मोत्सवको अवसरमा सम्मान गरिएको छ । शुक्रबार शर्माकै निबास घोराही–६ मसिनामा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी राप्ती साहित्य…
इच्छुक स्मृति पुरस्कार शर्मा, रेग्मी र पहाडीलाई
भालुबाङ (दाङ), १३ जेठ । पत्रकार एवं कवि सहिद कृष्ण सेन ‘इच्छुक’को १३ औं स्मृति दिवस सेनको पुख्र्यौंली घरमा मनाइएको छ । क्रान्तिकारी पत्रकार संघ, एकीकृत अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक महासंघ,…
कवितामा जीवनका रंगहरुको चर्चा
दाङ, ३ माघ । मान्छेले बनाएको मन्दिर मन्दिरभित्रको देउता मान्छे उसैसँग डराउँछ युग पगालेर मान्छेले स्थापना गरेको आस्था हो ईश्वर उही ईश्वरको अगाडि मान्छे अपराध गर्छ (मान्छेको भगवान) माथिका यी…
मदानीमा सुनिए सरिताका कविता
दाङ, २६ पुस । यो माटोबेगर कोही छैन मेरो आफन्त यसैमा पुरिएका छन् महामारीले मासिएका मेरा पुर्खाहरूका हस्तिहाड औलोले निलेका मेरा दौंतरीहरूका करङ हैजाले सोहोरेका मेरा केटाकेटीका कलिला खप्पर म…